Gaalkacyo: Dab ka kacay kaalin lagu iibiyo shidaalka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Galmudug / Gaalkacyo: Dab ka kacay kaalin lagu iibiyo shidaalka
Gaalkacyo: Dab ka kacay kaalin lagu iibiyo shidaalka
February 15, 2019 - By: Mohamed Jeenyo
Dab khasaare lixaad leh dhaliyay ayaa xalay waxa uu ka kacay goob ganacsi oo ku taala koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Dabka ayaa sida wararku ay sheegayaan waxa uu kacay kaalin lagu iibiyo shidaalka kuna taala wadada loo yaqaan Astaan golol ee Koonfurta magaalada Gaalkacyo, waxaana lasoo sheegayaa in uu ku dhaafay goobo kale oo ganacsi oo u dhow goobta uu dabkau ka kacay.
Masuuliyiinta Maamulka dowlada Hoose ee Gaalkacyo ee dhanka Galmudug oo waxyar kadib gaaray goobta uu dabku ka kacay ayaa sheegay in ay jiraan khasaare hantiyadeed oo uu dhaliyay dabkan walow aanay sheegin cid waxyeelo nafeed ay kasoo gaartay dabka kacay maadama ay ahayd xili habeenimo ah.
Sidoo kale masuuliyiinta ayaa xusay in ay gurmad ka heleen maamulka Dowlada hoose ee Puntland ee magaalada Gaalkacyo ,iyagoona xusay in gurmadka kadib lagu guuleystay in la bakhtiiyo dabka ka kacay kaalinta shidaalka ee ku taala Koonfurta magaalada.
Ilaa hada lama oga nooca dab ee ka kacay kaalinka shidaalka iyo waxa sababay hase yeeshee mulkiilayaasha goobtan ganacsi ee gubatay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aanay ogeyn sida ay wax u dheceen balde ay kusoo baraarugeen XIII uu kacay dabka baabi’yay qaar kamid ah hantidooda.
Si kastaba dadaalada ay sameeyeen labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo ayaa keenay in laga hortago khasaare kale oo hantiyadeed oo uu geysan lahaa dabka ka kacay kaalinka shidaalka iyadoona arintan ay muujinayso sida labada dhinac ee shacab iyo maamul ay diyaar ugu yihiin in ay iskugu soo gurmadaan marks ay timado xaaladada noocan oo kale ah.